Shirka Siyaasadda Dhalinyarada oo Muqdisho ka furmaya – Radio Muqdisho
Shirka Siyaasadda Dhalinyarada oo Muqdisho ka furmaya
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmaya Shirweynaha Qaran ee siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed,kaasi oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Soomaaliya.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka iyo dibadiisa,madaxda Dowladda,ururada bulshada Rayidka iyo marti sharaf kale.
Maalmihii ugu dambeeyey Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray dhalinyaro badan oo ka yimid qurbaha iyo gobolada dalka,kuwaasi oo isku diyaarinayay in ay ka qeybgalaan shirka looga hadlayo mustaqbalka Dhalinyarada Soomaaliyeed.
Sidoo kale shirka waxaa loogu hadlaya sidii loo mideyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed.
Diyaarad sida Maxaabiis oo goor dhaw ka soo degaysa Muqdisho